Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya; yaan doonayn in assayda la dhigo !!
Itobiya; yaan doonayn in assayda la dhigo !!
Posted by ONA Admin	/ November 20, 2012
Mingistu Xayle Maryam Hooyadii ayaa waxay u oyday 3ex litir oo ilmo ah willkeedii oo furanta dagaalka jiray wakhtigii ogaden war waxayna ku laxaamaday daasad. Waxay tidhi waxaan ooyaay 3ex litir oo ilmo ah oon rabaa inaan kaydiyo. Markuu soo laabtay ayuu haweenkii ree Shawa ku amray in oohintii hooyadii loo ooyo 3ex maalmood.
Zanawi dhimashadiisii 3ex bilood kadib waxaa soo muuqada dhaawacii geridiisu u gaysatay saaxiibadii iyo fursadaha geeridiisii ay siisay cadawgoodii.. waxaa kale oo soo ifbaxaysa kala fogaanshaha kuwii Zanawi ku xeerraa iyo kuwii sii daba yaalay ay ku kala fogaanayaan xusuustiisa.
Iyadoo ku cabanaysa in kaligeed ay wayday Melez ayay xaaskiisu ku adkaysatay in qasriga ay dagaanaayeen ayna ka guuraynin maadaama arwaaxdii zanawi u soo hooyan doonto. Waxayna sidoo kale xaas kii Zanawi codsatay in munaasabad “illin-ururin” ah loo qabto haweenka baroorta ee Ethiopia.
TPLF-na waxay geeridiisa u isticmaalaysaa ujeedooyin siyasadeed iyagoo doonaya inay wakhti ku iibsadaan. Arimaha ugu badani waxay dhaceen inkastoy wali qarsoonyihiin 2ba isbuuc kadib markii la dhaariyay ninka lasheegay inuu badalay Melez. Howshii koobad waxay ahayd markii Azeb Mesfin ay diiday inay ka guurto Qasriga madaxtooyada. Xujada ugu wayn ay cusgatayna waxay ahayd inayna dhamaanin baroordiiqdii Melez.si ay u sii dheerayso joogitaankeeda. Waxay abaabushey xaflado oohin ah (illin-ururin) oo haweenka baroor-yaqaanka Itobiya laysugu keenay. Waxase layaab kale ahayd in Azeb ay codsi u gudbisay waaxda dhaqanka iyo taariikhda iyadoo dalbanaysa in xafiiskii Malez iyo gurigiisiiba loo badalo madxaf (museum).
Xidhiidho qarsoodi ah oo dhexmaray waaxda sirdoonka iyo dawlada hoose ee Addis Ababa ayaa muujinaya inay horay uga wadahadleen qorshe lagu doonayo in goobo-taariikhed Tigray-ga looga sameeyo Adis, iyadoo xogtasi ay sheegeyso in laga yaabo in taalooyin iyo goobo kale oo soo jireen ahaa lagu badali doono kuwa cusub oo Tigray ah. Waxayna xogtaasi tibaaxaysaa suurtagalnimada hindisaha haweenaydii Melez.
Sidookale waxaa ka jira EPRDF/TPLF mu’aamarado lagu doonayo in lagaga hortaago ninka badaley Zanawi inuu wax isbadal ah sameeyo. 3ex isbuuc kadib dhaarintiisii wuxuu kulan caadi ah la qaatay gudida fulinte ee EPRDF. Inkastoo uu ballanqaaday inuu ku soco ndoono siyaasadii Zanawi dhinaca dibada, dhaqaalaha iyo xaqiijinta in xisbigani awooda dalka haysto wakhtiga ugu dheer ee suurtagal ah, hadana wuxuu soo jeediyay in isbadal lagu sameeyo ha’adaha nabadsugida, shirkadaha waawayn ee dawlada sida Ethiopian Airways, kambaniga wayn ee caymiska(Ethiopian insurance corporation) iyo urur-bulshedyada dawladu maalgaliso (NGOs). Shirkada Ethiopian Airways iyo Shirkada caymiska ee Ethiopia oo assalkeedii ahayd 12 shirkadood oo dawladii Dargiga ay qaramaysay kalana wareegtay 12 million oo birr dadkii lahaa sanadkii1976 ayaa la sheegaa inay lafdhabar u tahay nolosha siyaasadeed ee TPLF. Sidoo kale ha’ad layidhaahdo dib u dajinta Tigray ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano EFFORT oy madax katahay haweenaydii Zanawi ayaa lacag badan oo dawladu leedahay magaceeda lagu cunaa.
Hadaba madaxdii TPLF ee gudida fulinta ayaa diiday hindisahaa waxayna xujo uga dhigeen inay khayaamo ku tahay taariikhdii iyo waxqabadkii Nin ay kuligood u yaqaanaan halyay balse umadaha kalee uu xukumay u taqaanay dhiigyo cab. Kooxda loo yaqaano Thowriyiinta oo ah kuwa ugu cad-cad oo dhamaantood ka soojeeda Tigray ayay gacanta ugu jiraan hay’a dahaasi, geridii Zanaawi kadibna waxay qaateen xeelad siyaasadeed oo ah in wakhtiga u hadhay xukuumada uuna imaanin wax isbadal ihi iyadoy u muuqato inay ku guulasyteen ayuu hadafkooda iyo ku talagalgoduba yahay in doorashada soo socota ay gacantoota dib ugu soo laabato jagada Raysul-wazarenimo ee dalku iyadoo hadii wax isbadal ah lagu sameeyo dawladan hadda jirta ay adkaan doonto inay meel marinyaan ahdaafdoodaas.
Mashruuca sii wadida baroor diiqda Zanawi waxaa dano waawayn ugu jiraan qawmiyadda Tgray iyo kuwa ku hoos nool ee ka taajiray cabudhinta shacabadooda. Taariikhaha beenta ah ee lagu xusayo Zanawi na waxaa loo adeegsan doonaa isla iyagaas. Ilo ku dhaw xafiiska arimaha fadaraalka wuxuu sheegayaa in wareegtooyin la gaadhsiiyay madaxwaynayasha kililada Tigraygu xukumaan sida ka Somalida, Cafarta, Oromada iwm. Wareegtadaas waxaa lagu amray inay si dag-dag ah sare ugu qaadaan magaca Zanawi. Dhinaca ismaamulka Somalida waxaan aragnay isbitaalo loogu magacdaray Zanawi. Dhinaca Adis ababa sida laga soo xigtay dad architectures oon magacyadooda lasheegin waxaa jira dhawr sawir ama taalo oo lasoo bandhigay, waxaana kamid ah in fikradaha la soo jeediyay in boqoradii Axmarada taalooyinkoodii la fujiyo loona badalo Zanawi taaladiisa, iyo in badhatamaha magaalada laga dhiso taalo wayn oo muujinaysa Itobiya oo u ooyaysa Zanawi. Faalo qore katirsan xafiiska Sir-baadhista ONA ayaa yidhi “waxaaba lagayaabaa inaan aragno haamo waawayn oo biyo laga buuxiyay oo kor looga taagay Addis laguna sheego inay tahay ilmadii loo ooyay Zanawi oo la ururiyay, iyo sawirada horjoogayaasha kililada oo u barooranaya Zanawi “
OMAR JIGJIGA SA